Meizu M3 Xusuusin, dib u eegis fiidiyow ah iyo falanqeyn | Androidsis
Suuqa taleefanka gacanta waxaa hareeyay shirkadaha Shiinaha ee bixiya xalka tayada ugu sareysa. Waqtigaas markii taleefannada casriga ah ee Shiinaha ay ula mid ahaayeen dhibaatooyinka ayaa looga tagay mahadnaqa shaqada wanaagsan ee noocyada qaarkood. Tusaale cadna waa Meizu.
Markii aan fursad u helay falanqee Meizu Pro 6 Aad bay iigu caddaatay in soo-saaruhu doonayo inuu bixiyo tayo wanaagsan, iyo dammaanad ka fiican Spain. Hadda waxaan fursad u helay inaan isku dayo mid kale oo xalkiisa ah waxaanan horeyba kuugu sheegayaa in dareenkeyga kadib falanqaynta fiidiyowga waxaan ka sameeyay Meizu M3 Note Ma noqon karaan kuwa kafiican.
1 Meizu wuxuu ku guuleystey inuu noqdo bartilmaameedka suuqa iyadoo ay ugu wacan tahay tayada xalalkiisa
2 Naqshadeyn oo samee: telefoon qaali ah, adag oo qurux badan
3 Astaamaha farsamada: Meizu M3 Note wuxuu u hoggaansamayaa qoraalka
4 Software software bilaash ah
5 Shaashad fulineysa, laakiin aan kala sooc lahayn
6 Hadle aan faan badan lahayn
7 Madax-bannaanida: Meizu M3 Note uma baahnid batteri dibadeed
8.1 Sawirro ayaa laga qaaday kamaradda Meizu M3 Note
Meizu wuxuu ku guuleystey inuu noqdo bartilmaameedka suuqa iyadoo ay ugu wacan tahay tayada xalalkiisa
Sanadihii aan soo aragnay kororka heerka M, Xariiq xariiqa boosteejooyinka ka hooseeya MX ee la amaanay, laakiin in cusbooneysiin kasta ay la yaabto iyadoo kor loo qaadayo heerka tayada. Iyo tan 'M3 Note', walaalkiis ka weyn ee M3, ayaa tusaale cusub u ah tan.
Meizu wuxuu qabanayaa shaqo aad u fiican oo haddii ay ku sii socoto isla dariiqa, waxay dhawaan u noqon doontaa halbeeg lagu qiimeeyo waddankeenna. Ha u weynaadaan kuwa waaweyn sida Samsung ama LG inay ruxmaan maxaa yeelay carqaladeynta noocyada sida Huawei, ZTE ama Meizu way is beddeli doontaa, haddii aysan weli sameyn, suuqa taleefanka.
Naqshadeyn oo samee: telefoon qaali ah, adag oo qurux badan
Meizu wuxuu ku soo laabanayaa inuu sharad ku galo 6.000 aluminium taxane ah si loo abuuro jirka unibody M3 ah Xusuusnow inay leedahay laba dhammayn oo kala duwan xagga dambe: lagu safeeyey geesaha kore iyo hoose isla markaana lagu hagaajiyey dusha sare ee guriga, iyadoo la siinayo taabasho aad u fiican oo ka sarreeya oo dhan, kana ilaalineysa inay tartiib tartiib gacmahaaga uga siibato in kasta oo walxaha loo adeegsaday dhismihiisa. .
Telefoonku waa terminal weyn, oo leh qiyaastii 153,6 x 75,5 x 8,2 mm culeyskiisuna yahay 163 garaam waxaa iska cad in shaashadiisa oo 5.5 inji ah ay ka dhigeyso taleefan adag in hal gacan lagu isticmaalo.
Sikastaba ah geesaha qalooca ka dhig wax aad u raaxo leh in la haysto, in kasta oo aanad la jaanqaadayn sida boosteejooyinka kale ee leh shaashad isku mid ah. Faahfaahin kale waxay tahay in terminalku waxyar ka dhumuc weyn yahay sida caadiga ah, waa macquul haddii aan tixgelinno batroolkeeda cajiibka ah ee 4.100 mAh oo bixiya madax-bannaanida aan horay loo arag.
Dhanka hore waxaan ka helaynaa isaga Shaashad 5.5-inji ah oo deggan 73%. Looxyada ayaa si wanaagsan loo isticmaalay, in kasta oo ay weli hal talaabo ka dambeeyaan boosteejooyinka kale, waa in la xusuusnaadaa in taleefanka kudhowaad 200 - 230 euro waxay kuxirantahay tusaalaha, markaa ma filan karno taleefan leh naqshad hagaagsan.
Qeybta hoose waa Badhanka guriga oo leh shaqo akhristaha faraha. Shakhsiyan, waxaan si fiican u jeclahay inay ku yaalliin dhabarka, kamaradda hoosteeda, laakiin waxaa jira dad doorbidaya badhanka dhinaca hore inay awoodaan inay furaan taleefanka marka uu miiska ku fadhiyo. Ku saabsan dhadhanka, midabada.
Badhamada xakamaynta mugga iyo terminal on / off Waxay ku yaalliin dhinaca bidix ee Meizu M3 Note. Dhammaantood waxay bixiyaan safar wanaagsan iyo in ka badan cadaadis sax ah, iyo sidoo kale dhisme bir ah oo siinaya dareen weyn oo cimri dherer ah.
Dhinaca bidix ee taleefanka waxaan ka helaynaa godka kaarka SIM-ka ee nano iyo meel kale oo lagu dhejiyo kaarka SD-ga yar iyo ballaarinta xusuusta terminalka. Halka qeybta hoose aan kaheleyno micro USB portka iyo soosaarka afhayeenka, qeybta kore waxaa loogu talagalay 3.5 mm wax soo saarka codka. Ugu dambeyntiina waxaan leenahay guddi gadaal ah oo kamaradda ugu weyn ee taleefanka ay ku taal, oo leh labalaab midab leh oo LED ah, marka lagu daro astaanta astaanta.
Gaaban, taleefan leh qiimo aad u sarreeya oo dhammaanaya taas oo runtii dareemaysa wanaag gacanta. Iyadoo la tixgelinayo qiimaheeda, shaqada ay soo saarte ka sameysay arrintan waa mid aad u fiican, iyadoo la siinayo dareenka ah in Meizu M3 Note uu yahay heer sare oo leh jirkaas laga sameeyay aluminium.
Astaamaha farsamada: Meizu M3 Note wuxuu u hoggaansamayaa qoraalka
Tusaale M3 Fiiro gaar ah
Nidaamka hawlgalka Android 5.1 hoostiisa lakabka Meizu 5.1.3
Screen 5'5 "IPS oo leh teknolojiyadda 2.5D iyo xallinta HD HD 1920 x 1080 oo gaareysa 403 dpi
Gacaliye Sideed-xuddunta Mediatek Helio P10 (afar Cortex-A 53 diirkja 1.8 GHz iyo afar xudun Cortex-A53 oo 1 GHz ah)
RAM 2 ama 3 GB oo xasuusta ah iyadoo kuxiran qaabka
Kaydinta gudaha 16 ama 32 GB waxay kuxirantahay qaabka lagu balaarin karo MicroSD ilaa 256 GB
Kaamirada gadaal 13 MPX oo leh 2.2 furfurnaan ficil / autofocus / xasilinta muuqaalka muuqaalka / ogaanshaha wajiga / panorama / HDR / laba-midab LED flash / Geolocation / Duubista fiidiyowga ee tayada 1080p
Kaameradda hore 5 MPX oo leh aagga fure 2 / video kujira 1080p
Batariga 4100 mAh aan laga saari karin
Cabbirada X x 153.6 75.5 8.2 mm
Qiimaha 199 ama 230 euro iyadoo kuxiran qaabka
Sidee ayuu processor-ka Helio P10 ula dhaqmaa 2 GB oo RAM ah? Qaybta uu Meizu noogu soo diray falanqaynta ayaa lahaa qalabkan waana inaan idhaahdaa wax cabasho ah ma qabo. Terminal-ku wuxuu si habsami leh u shaqeeyaa oo hawlo badan ayaa ka soo baxa iyada oo aan wax dhibaato ah, iyada oo aan la arkin wax dib u dhac ah inta lagu jiro isticmaalka.
Sidaad u aragtayba waan ahaa tijaabinta cayaaraha u baahan culeys garaaf badan iyo Meizu M3 Note iyaga ayaa dhib ku raray, oo kuu oggolaanaya inaad ka faa'iideysato shaashadeeda 5.5-inji, markaa haddii aad raadineyso taleefan awood leh adigoon lacag badan kaaga tagin, Meizu M3 Note waa ikhtiyaar aad u xiiso badan.
Haa, adigu Waxaan kugula talineynaa inaad u socoto nooca leh 32 GB oo xasuusta gudaha ah iyo 3 GB oo RAM ah, iyagu waa 40 euro oo ay ku kala duwan yihiin, laakiin waad u mahadcelin doontaa maadaama shaqsiyan 16 GB oo ka mid ah qeybta imtixaankeygu ay umuuqdaan wax cadaalad ah, iyadoo aan loo eegin inta kaarka micro SD ee aan dhigayo.
Software software bilaash ah
Meizu M3 Note wuxuu la socdaa Android 5.1, faahfaahsan oo aanan jeclayn, in kasta oo nasiib wanaag ay caadadeeda Flyme interface tahay tan ugu fiican ee aan soo arkay. Taleefanka ayaa gebi ahaanba nadiif ah, wuxuu ku yimaadaa xirmo qalab ah oo isku dhafan oo wareega, muraayada weyneeya iyo wax kale oo yar. Wax kasta oo kale waa inaan iska dhignaa. Waad ku mahadsan tahay maad ku darin barnaamijyada qashinka ah.
Mid ka mid ah Barnaamijyo yar oo imanaya horay loo sii rakibay ayaa M3 Xusuusin siinaya heer sare oo ammaan ah. Waana in codsiga Amniga uu bixiyo waxqabad hagaajin ah oo u oggolaanaya hagaajin gaar ah iyo nadiifinta kaydinta iyo faylasha kale ee haraaga ah iyada oo aan loo baahnayn barnaamijyo kale.
Tani waa halka aad ka faraha akhristaha, dareeraha biometric-ka oo u baahan qaabeyn aad u sax ah oo si sax ah u shaqeeya. Aniga, oo loo bartay inaan si dhaqso ah u sameeyo anigoon walwal badan qabin, dhibaatooyin ayaa iga haystay in la aqoonsado faraheyga, laakiin ka dib markii aan tirtiray oo aan bilaabay howsha raacaya talaabooyinka iyo inaan wax saxo, runta ayaa ah inaan ogaaday horumar muuqda.
Qayb aan rabo inaan muujiyo ayaa ah Isku xidhka Meizu wuxuu xidhayaa codsiyada qaarkood ee ku jira asalka. Haddii aad iibsato taleefankan, si fiican u fiiri qaybta amniga maaddaama ay u badan tahay in WhatsApp uu xirmayo oo aadan heli doonin ogeysiisyo. Ku kalsoonow inay aad u fududahay in la xaliyo dhibaatadan, waxaa jira boqolaal kulan oo internetka ah halkaasoo ay ku sharxayaan meesha ay tahay inaad taabato goobaha taleefanka si aad u xalliso xiritaanka codsiyada asalka.
Faahfaahin kale oo aan rabo inaan muujiyo ayaa ah taas Meizu M3 Note wuxuu adeegsanayaa nidaam yar oo ka duwan sidii uu ugu dhex mari lahaa is dhexgalka. Tusaale ahaan, waxaan si tartiib ah u riixeynaa badhanka Guriga si aan dib ugulaabanno hal mar, cadaadis isdaba joog ah oo aan toos ugu aadno shaashadda weyn, ama waxaan farta ku fiiqeynaa salka hoose ee boosteejada si aan u furno howlo fara badan. Nidaam, markii aad la qabsato, runti yahay mid wax ku ool ah oo raaxo leh.
Shaashad fulineysa, laakiin aan kala sooc lahayn
M3 Note wuxuu leeyahay shaashad ka kooban a 5.5 inch IPS guddi kaas oo gaara xalka 1080 x 190 pixels iyo 403 dpi. Bandhigu wuxuu leeyahay shahaado faahfaahsan oo wanaagsan wuxuuna bixiyaa midabbo qafiif ah, iyada oo ay ugu wacan tahay heerkulka shaashadda ee la aqbali karo, in kasta oo nalka dhalaalaya uusan aad u wanaagsanayn.
Mararka qaar waxaan ogaaday in terminaalku waqti qaato si uu si toos ah ugu hagaajiyo nuurka, gaar ahaan maalmaha qorraxdu aadka u kulushahay, marka waa inaan aadaa goobaha oo aan ku kordhiyaa dhalaalka gacanta.
Sus 450 nits Waxay la kulmaan in ka badan intii ku filnayd, in kasta oo ay inyar ka hooseeyaan taleefannada kale, laakiin ay yihiin meel dhexaad ah, shaqada qaybtani way ka badan tahay in ku filan. Xusuusnow in xaglaha fiirintu ay ka saxsan yihiin, oo nagu martiqaadaya inaan ku raaxaysano waxyaabaha ku jira noocyo badan oo warbaahin ah oo dhererkeedu yahay 5.5 inji.
Hadle aan faan badan lahayn
Telefoonada ugu badan waxay ku hadlaan salka saldhiga, taas oo noo horseedeysa inaan ku xirno codka maqalka markaan ciyaareyno, nasiib daro Meizu M3 Note wuxuu raacay khadka inta badan terminal-ka.
Dhibaato ku jirta xalka adag, ilaa aad ka dhigto kuwa ku hadla afka hore adoo kordhinaya cabirka terminalka. In la dhaho tayada maqalka ayaa aad u liidata guud ahaan, xoogaa yareynta khibrada markaad fiirineyso waxyaabaha ku jira warbaahinta badan. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad u isticmaasho dhagaha dhagaha si aad ugu raaxeysato muusikada, fiidiyowyada ama ciyaaraha ku yaal bartan.
Madax-bannaanida: Meizu M3 Note uma baahnid batteri dibadeed
Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan taleefankan ayaa ah batari cajiib ah 4.100 Mah kaas oo bixiya madax-bannaanid aad u wanaagsan samaynta dhibcaha 'Meizu M3 Note' dhawr dhibcood.
Hawl celcelis ahaan, adoo adeegsanaya Spotify saacad maalintii, ka baaraandeg internet, ka jawaabida emaylka iyo adeegsiga farriimaha deg degga ah baytarigu wuxuu igu qaatay celcelis ahaan 25 saacadood.
Tani waxay u tarjumaysaa madax-bannaanida wanaagsan ee kuu dammaanad qaadaysa inaad guriga timaaddo ugu yaraan 30% batari. Xitaa mararka qaarkood waxaan isticmaalaa terminal laba maalmood anigoon lacag ka qaadin, faahfaahin si loo tixgeliyo.
Way cadahay taas Shaqada ay qabatay Meizu si loo hagaajiyo batariga M3 Note ilaa ugu badnaan waxay ahayd mid aad u fiican, oo noo oggolaaneysa inaan ka tagno baytariga banaanka guriga maadaama aanan u baahan doonin gabi ahaanba.
Meizu M3 Note wuxuu leeyahay a 5 megapixel kamarad hore oo leh f / 2.0, halka kamaradeeda dambe ay ka kooban tahay a 13 megapixel sensor oo leh f / 2.2 furitaan. Dabeecaddiisu waa mid aad u wanaagsan, sameynta qabashooyin tayo sare leh, oo leh midabbo muuqda oo dabiici ah, gaar ahaan deegaanno si fiican u shidan.
Durba hadaan rabno inaan sawiro ku qaadno deegaanno leh iftiin dhexdhexaad ah ama buuq aan si fiican u iftiimin ayaa u muuqda oo, in kastoo flash laba midab LED wax badan bay caawisaa, tayadu way liidataa. Dabcan, softiweerka kamaradda, oo kuu saamaxaya inaad isku hagaajiso inta badan qiyaasaha habka gacanta, wuxuu noo oggolaanayaa inaan si weyn u horumarinno qabashada aan qaadanno.
Xaaladdan oo kale waxaan ka heli a kamarad sawir aad u fiican ku qaadata qaabka otomaatiga ah ilaa iyo inta aan haysanno xaalado iftiin wanaagsan laakiin taasi waxay nagu qasbeysaa inaan barano sirta habka gacanta si aan awood ugu yeelano inaan si buuxda u tuujinno fursadaha kamaradda Meizu M3 Note ee xaaladaha iftiinka yar.
Waxaan kugula talinayaa inaad waqti kubixiso adoo iskuxiraya cabirrada sida ISO ama xawaaraha xarkaha si aad uga faa'iideysato awooda buuxda ee kamaradda Meizu M3 Note. Ugu dambeyntiina waxaan kaaga tegayaa sawirro taxane ah oo lala qaaday taleefanka, dhammaantoodna waxay ku jiraan qaab otomaatig ah, si aad u aragto fursadaha ay bixiso kamaradda xaruntan.
Sawirro ayaa laga qaaday kamaradda Meizu M3 Note
Ka istaagida aagga dhexe waa caqabad sii kordheysa oo adag oo Meizu ayaa ku guuleysata iyada oo ay ugu wacan tahay m3 Note, oo ah terminaal dhammeyn wanaagsan, akhristaha faraha iyo qiime aad u macquul ah.
Waxaad ka heli doontaa telefoonno kooban oo leh shaashad 5.5-inji ah oo aad ka iibsan karto dukaan kasta oo jidh ahaaneed ama adoo adeegsanaya websaydhka soo-saaraha isagoo leh damaanad qaadka Spain.
Sharadka Meizu wuxuu bixiyaa dhiirrigelinno aad u xiiso badan oo sameeya taleefankan mid ka mid ah xalka ugu fiican haddii aad raadineyso xarago awood leh, leh madax-bannaani weyn oo aan lacag badan ku bixin.
Raadinta laakiin, Waxaan u maqanahay nidaam lacag-bixin deg deg ah, taas oo horeyba u fiicnaan laheyd haddii aan tixgelinno madax-bannaanideeda cajiibka ah, ama tayada liidata ee ku hadlaheeda, laakiin waa inaan idhaahdaa Meizu M3 Note waa taleefan aad u fiican oo leh qaabeyn tayo leh iyada oo ay ugu mahadcelinayaan jirkeeda qof kasta oo ka samaysan aluminium iyo in aysan ahayn waa ku niyad jabi doontaa.
Meizu m3 Xusuusin
Qiime aan caadi aheyn oo lacag ah
Afayeenku wax yar ayuu ka tagayaa oo la doonayaa
Ma laha nidaam lacag-bixin deg deg ah ku shaqeeya
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Meizu » Meizu M3 Xusuusin, falanqayn iyo ra'yi
Waxaan u iibsaday wiilkayga, tayada / qiimaha waa ikhtiyaar aad u wanaagsan. Waxaan sugayaa in Flyme-ka la cusbooneysiiyo, nooca hadda jira wuxuu leeyahay cillad. Kuuma ogolaanayo inaad gacanta ku darto APN, markaa mabda 'ahaan kuwa idinka mid ah ee isticmaala OVM maanta kuma talinayo, waxaa lagaa tagi doonaa xogta moobiilka la cambaareeyay.